Tufaaxa - Mac - Geofumadas
Tufaax - Mac
Macluumaadka ku saabsan Apple Dhamaanba Macalinka Mac
Shalay waxay u ahayd maalin aad u xiiso badan taageerayaasha tikniyoolajiyadda Apple, gaar ahaan kuwa hadda isticmaala iyo kuwa suurtogalka ah ee isticmaala kiniinnada Ipad. Inkasta oo ereyada muhiimka ah ee maanta ka dheregsan mashiinnada raadinta ee mowduuca ay weydiinayaan dhaleeceynta Ipad 2, haddii ay ku habboon tahay in hadda la iibsado, haddii Ipad 1 la cusbooneysiin karo ...
Sugitaanka Ipad 2
Waa wax lagu qoslo, laakiin qayb wanaagsan oo ka mid ah dadka isticmaala moobiilka ayaa sugaya waxa la soo bandhigi doono saacado yar gudahood. Iyada oo meelaynta ay Apple ku leedahay taleefannada gacanta, waxaa lagama maarmaan noqon lahayd in la arko waxa dhaca: Tom Cook ma ogaan doonaa sida loo soo bandhigo toy-ga isla saameynta uu leeyahay Shaqooyinka sanadkii la soo dhaafay? Ma ku laaban doontaa ...
Dhowr maalmood ka hor Google waxay ballaarisay noocyadeeda kala duwan ee ay ku taageerto faylasha Google Docs. Markii hore, si dhib leh waad arki kari lahayd faylasha Xafiiska sida Word, Excel, iyo PowerPoint. In kasta oo la akhrin karo oo keliya, Google wuxuu muujinayaa ku adkaysigiisa inuu Chrome siinayo awooddiisa nidaamka hawlgalka ee daruurta. Waa la filan karaa in shaqooyinkan sidoo kale ...
Apple - Mac, AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, Internet iyo Blogs